Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Rivo-doza Henry tamin'ny fianjerana niaraka tamin'i New York
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny rivodoza Henri dia nanohy ny diany nankany New York ny alahady teo. Ny oram-be talohan'io dia efa niteraka tondra-drano lehibe tao Big Apple ny asabotsy alina. Nijanona ny fifamoivoizana ambanin'ny tany sy ny lalana.
Nanomboka nifindrafindra ny Alahady Avaratra Atsinanana ny rivodoza Henri,
Ny oram-batravatra dia efa nahatratra faritra maro, niteraka tondra-drano.
Ny fidinan'i Henri andrasana mialoha any Long Island, New York na atsimon'ny New England amin'ny alahady maraina na hariva ny tolak'andro dia antenaina hanitarana ny sisin-tany manodidina.
Hatramin'ny alahady maraina tamin'ny 5.30 maraina EST dia teo amin'ny 120 miles atsimo atsimoatsinanan'ny Montauk Point, New York i Henri, niaraka tamin'ny rivotra mahatratra 75 mph, ny Ivotoerana Hurricane nasionaly (NHC) voalaza. Niainga nianavaratra sahabo ho 18 mph izy.
Nisy fampitandremana momba ny rivo-doza nanan-kery ho an'ny ankamaroan'ny moron'ny Long Island niaraka tamin'ny ampahany tao Connecticut sy Massachusetts ary Block Island.
Ny fampitambarana fampitandremana sy fiambenana tafio-drivotra dia natao ho an'ny ankamaroan'ny Long Island sy ny morontsirak'i Massachusetts.
Misy fampitandremana amin'ny tafio-drivotra mahery ho an'ny ... * morontsiraka atsimo amin'ny Long Island manomboka amin'ny Mastic Beach ka hatrany Montauk Point New York * amoron-tsiraka avaratry Long Island manomboka amin'ny Montauk Point ka hatrany Flushing New York * Flushing New York ka hatrany Chatham Massachusetts * Nantucket, Vineyard an'i Martha , ary Block Island A Storm Surge Watch dia manan-kery ho an'ny ... * East Rockaway Inlet mankany Mastic New York * Avaratry Chatham Massachusetts ka hatrany Sagamore Beach Massachusetts * Cape Cod Bay Fampitandremana amin'ny rivodoza dia manan-kery ho an'ny ... * South Coast of Long Island manomboka amin'ny Fire Island Inlet ka hatrany amin'ny Montauk Point * Amoron-tsiraka avaratry Long Island manomboka amin'ny Port Jefferson Harbor ka hatrany Montauk Point * New Haven Connecticut mankany andrefan'ny Westport Massachusetts * Block Island Misy fampitandremana avy amin'ny tafio-drivotra tropikaly ho an'ny ... * Port Jefferson Harbour mankany Andrefan'i New Haven Connecticut * amoron-tsiraka atsimo amin'ny Long Island manomboka eo andrefan'ny Fire Island Inlet mankany East Rockaway Inlet * Westport Massachusetts ka hatrany Chatham Massachusetts, ao anatin'izany i Martha's Vineyard sy Nantucket * Coastal New York ary New J ersey andrefan'ny East Rockaway Inlet mankany Manasquan Inlet, ao anatin'izany ny New York City A Storm Surge Warning dia midika fa misy loza ateraky ny fihenan'ny ainy, avy amin'ny fiakaran'ny rano miakatra mankamin'ny morontsiraka. Raha mila an-tsary ireo faritra mety hampidi-doza dia jereo ny National Weather Service Storm Surge Watch / Warning Graphic, azo jerena ao amin'ny hurricanes.gov. Loza mitera-doza io. Ireo olona hita ao amin'ireny faritra ireny dia tokony handray ny fepetra rehetra ilaina mba hiarovana ny aina sy ny fananana amin'ny fiakaran'ny rano sy ny mety hisian'ny toe-javatra mampidi-doza hafa. Araho haingana ny fanesorana olona sy torolàlana hafa avy amin'ny tompon'andraikitra eo an-toerana. Ny fampitandremana momba ny rivo-doza dia midika fa andrasana any ho any anatin'ny faritra fampitandremana ny toetr'andro. Fampitandremana amin'ny tafio-drivotra tropikaly dia midika fa andrasana any ho any anatin'ny faritra fampitandremana ny toedrahona tropikaly. A Storm Surge Watch dia midika fa misy ny mety hisian'ny fihoaran-doza mandrahona ny ainy, avy amin'ny fiakaran'ny rano miakatra mankamin'ny morontsiraka. Raha mila an-tsary ireo faritra mety hampidi-doza dia jereo ny National Weather Service Storm Surge Watch / Warning Graphic, azo jerena ao amin'ny hurricanes.gov. Ny tombontsoa hafa any amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Etazonia dia tokony hanara-maso ny fandrosoan'i Henri. Raha mila fampahalalana momba ny oram-baratra manokana ho an'ny faritra misy anao, ao anatin'izany ny fiambenana sy fampitandremana anaty, azafady mba haraho maso ny vokatra navoakan'ny biraon'ny toetr'andro nasionaly momba ny toetrandro.